Izinhlanzi zokuthatha inyama nezitsha zenyama - Hhayi nje iPasta Messina
NgoLwesibili kuya ngeSonto:
Izinhlanzi Zokuthatha Nezidlo Zenyama - Hhayi I-pasta Nje
Amafutha, amakha namaphunga azalelwe ukumangaza amehlo nolwanga.
4.5 /5 amavoti (amavoti angama-19)
Kumnandi I-gastronomy ejwayelekile yaseSicilian nge-yummy izitsha ezisuselwa ezinhlanzini e inyama yokuqala yokukhetha, Hhayi iPasta Nje kungokwasendaweni futhi gazinga e isitolo se-hamburger ngobuhle obuningi obulungele ukujabulisa ulwanga lwakho nsuku zonke. Itholakala ku- Messina ngokucebile nokuhlukahlukene imenyu yokuthatha Kokubili a isidlo sasemini che a isidlo sakusihlwa.
I-gastronomy ecebile enezitsha zezinhlanzi nemenyu ecebile yokuthatha ukuze unikeze okuhle kakhulu kulwanga lwakho
Nge imenyu ehlukahlukene kakhulu futhi emnandi, equkethe okuhle IHamburger, izifundo zokuqala nezesibili ezilungiselelwe inyama yokuqala nenhlanzi entsha, Hhayi iPasta Nje ivula iminyango yayo nsuku zonke ukuze gourmets di Messina. Igoli lalokhu okuthokomele gastronomy yinye kuphela: ukunambitha i-ubuhle begastronomic kuzo zonke izitsha ezinikelwayo. Izitsha ezinhle kakhulu, ezahlukahlukene izithako kukhethiwe, ukudla Yummy nekhwalithi ephezulu ekulungiseleleni. I- impahla eluhlaza lapha izinqumo zikhethwe ngokucophelela futhi zihlanganiswe ngendlela yokuthi kudalwe ukuvumelana okungenakuqhathaniswa kwama-flavour. I- imenyu icebile futhi yakhelwe zonke izinhlobo zolwanga: ngabathandi be inhlanzi kubalandeli be- Inyama yokuqala yokukhetha, kuze kufike kuma-gourmets angakwazi ukwenza ngaphandle kokuchichima nokuhahayo IHamburger. Lapha uzonambitha izindandatho ze-squid, i-franceschini, imfanzi, i-stockfish, inkukhu ebhakwe nokungapheli kokulunga okususelwa ku- inyama yenkonyana, ingulube, imifino nezinye izithako eziningi ezinhle kakhulu.
Izibiliboco ezifana ukuhaha kwensimbi, Inyama yangaphakathi, isitshulu, ikhodi, i-pasta ne inki ye-cuttlefish, izifundo ezisuselwa ku- isalmon entsha, izindlawu, imikhaza, konke okwethulwe ngobuhle ukwanelisa hhayi ulwanga kuphela, kodwa futhi namehlo akho. Emini, i- Deli izokuhlekisa ngeziphakamiso ezinhle kakhulu ze- cuisine ejwayelekile yaseSicily. Kusihlwa, noma kunjalo, kuzokumangaza ngokukhetha okuhle kwe i-hamburger.
Kusuka kuzitsha zokudoba kuya kuma-hamburger: wonke ama-nuances wokunambitheka eMessina
Hhayi iPasta Nje igama okuluhlelo lonke. I- amakhono gastronomic empeleni, lapha iziphakamiso azikhawulelwanga kokumnandi izitsha zokuqala, kodwa zihlanganisa nezibiliboco izifundo eziyinhloko ezisuselwa enyameni noma ka inhlanzi, rustic ngobuhle obungapheli, amasaladi ngemibala eyinkulungwane nokuhlanganiswa okunamandla kwe- i-hamburger ngama-flavour angenakulinganiswa. Okuxutshiwe okuthosiwe ngokuya ngemifino, inkukhu, ingulube noma i-ai ukudla kwasolwandle hlanganani lapha ngezifundo ze inhlanzi entsha, njengoba i-stockfish kuphekwe uku-oda ngezifundo ezimnandi inyama yokuqala yokukhetha. Ukuphakama kokwethulwa kwezitsha ezilungiselelwe kungenye yamaphuzu aqinile ale ndawo. Okuhlangenwe nakho kwe- ukudla okuthatha ukudla lapha kuthatha izitsha eziseceleni ezimnandi kakhulu ongazicabanga.
le i-hamburger bese umele amandla angenakuphikwa ngobusuku bakho ngenxa ye inhlanganisela yama-flavour ahlanganiswe ngobuchule ukuqinisekisa ukuqhuma kokunambitheka. Iziphuzo ezinikezwayo ziphakathi kweziphambili emakethe yokudla newayini, njenge-i 958 amawayini eSanteroit UNero d'Avola futhi i Ubhiya waseKronenbourg ngokuthepha. Insizakalo enomusa nenomusa ingesinye isici sokudlela esinikela empumelelweni yayo. Umberto e Sandra bahlala bekulungele ukukwamukela ngokumomotheka nobuhle obuningi ongeke usakwazi ukukwenza ngaphandle.
Ikheli: Nge-Monsignor D'Arrigo, iminyaka engama-50
I-POSTAL CODE: 98121
Umakhala ekhukhwini: 351 7347828
Umakhala ekhukhwini: 351 8755255
Ifasitela lesitolo: www.nonolopasta.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 03602940839